Miisaaniyada DF oo la diiday
26 Dec 26, 2012 - 6:47:23 AM
Miisaaniyada ay Xukuumada DF ku shaqeynayso Sanadka soo socda ayaa la diiday in la meel mariyo maanta 26 December,2012, kadib markii Xildhibanada Baarlamaanku ay cod u qaadeen waxaana shirka codka lagu qaaday shir Gudoominayay Prof. Maxamed Cismaan Jawaari oo ah Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia.
Xildhibaanada DF aya waxay doodo adag ka yeelanayeen Miisaaniyada iyagoo aad u dhaliilay kharashka ku baxaya Xafiisyada Madaxda DF iyagoo dalbaday in la dhimo kharashkhaas loona adeegsado sugida Amaanka.
"Kooramku wuxuu ahaa 163 Xildhibaan, 70 mudane way diideen Miisaaniyada, waxaa ogolaatay 54, sidoo kalena 39 mudane ayaa iyaguna ka maqnaa codeynta" ayuu yiri Prof. Jawaari oo gabagabadii kulanka la hadlay Saxaafada.
Gudoomiyuhu wuxuu sheegay in Wasaarada Maaliyada looga baahan yahay inay ku soo diyaariyso Miisaaniyada ayna ku horkeeno Baarlamaanka Muddo bil gudaheed ah sida uu qabo Dastuurka dalka.
Mudanayaasha Baarlamaanka ayaa sadexdii casho ee lasoo dhaafay dodo adag ka yeelanayay Miisaaniyada, waxaana labadii maalmood ee hore ka dhacay xarunta Baarlamaanka buuq kaasoo ka dhashay kala fikir duwanaashaha Miisaaniyada.
Wasiirka Maaliyada Somalia Maxamuud Xasan Suleymaan ayaa goobjoog ka ahaa kulankii maanta ee Baarlamaanka, isagoo dhageysanayay doodaha ay Xildhibaanadu iska dhaafsanayeen Miisaaniyada.